नागार्जुन दरबारमा अन्तिम राजालाई भेट्दा - विचार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
ली सिग्वाङ बेइजिङ जेठ १४
४१ वर्षअघि अध्यक्ष माओले २८ वर्षीय राजा वीरेन्द्र र सुन्दर रानी ऐश्वर्यलाई भेटे। अध्यक्ष माओले अघिल्लो वर्ष रिचार्ड निक्सनसँग हात मिलाएझैँ वीरेन्द्रसँग धेरैबेरसम्म हात मिलाए र एक घण्टा ४० मिनेट लामो कुराकानी गरे। भेटमा माओले छिङ्हाई–तिब्बत रेलमार्ग निर्माणको कुरा अघि सारे– ‘जबसम्म यो रेलमार्ग बन्दैन, तबसम्म मलाई निद्रा लाग्दैन।’
बेइजिङ फर्किनु अघिल्लो दिन, ९ फेब्रुअरी २०१४ मा तिब्बती गलैँचा किन्न म काठमाडौँको सडकमा निस्केको थिएँ। त्यहीबेला मेरो साथी स्यायो झुले फोन गरेर भने, ‘राजा ज्ञानेन्द्रले आज साँझ साढे छ बजे डाँडाको दरबारमा तपाईंसँग भेट्नेछन्।’
यो मेरो दोस्रो नेपाल भ्रमण थियो। सन् २०१० को गर्मी याममा म पहिलो पटक नेपाल आएको थिएँ। तिनताक एकदिन कप्युटर खोलेर आफ्नो भाषणको तयारी गर्नैलाग्दा राष्ट्रिय पोशाक लगाएकी उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला आएर मेरो नजिकै बसिन्। उनका पिता गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँच पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए। सुजाता भने पश्चिम चीनको सामाजिक तथा आर्थिक सुधारको जीवन्त वर्णन सुन्न समर्पित थिइन्। आफ्नो भाषण सकेर म चीनको आर्थिक सुधार र विकासबारे ब्रिफिङ गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवको निवासमा गएँ।
नेपालका माओवादी नेता प्रचण्डले मलाई माओत्से तुङको विचार, देङ स्याओ पिङको सिद्धान्त अनि नेपालको आर्थिक सुधार र विकासबारे छलफल गर्न दुई पटक बोलाइसकेका थिए।
चार वर्षअघिका ती भेटहरुमा नेपाली नेताहरुले चीनको आर्थिक चमत्कारको प्रशंसा गरेका थिए। तथापि उनीहरूको आशा छ, पश्चिमा शक्तिहरूले चीनमाथि निरन्तर गरिरहेको राजनीतिक घेराबन्दी र दलाई लामालाई दिएको सहयोगका बाबजुद चीनले आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय जगतको राजनीतिक प्रशंसा पाइरहने छ। भेटघाटका क्रममा नेपालका साथीहरूले बारम्बार सोध्ने गर्थे– कतै बजार अर्थतन्त्रले चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको शासनको वैधतालाई समाप्त त गर्दैन? मैले उनीहरुलाई सम्झाएँ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले खुसीको सूचकांक बढाएर आधुनिकतालाई पुनःपरिभाषित गर्नेछ, जसले चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको शासनको वैधतालाई पुनर्स्थापित गर्नेछ। खुसीको सूचकांकमा आरामदायी घर, स्वच्छ वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, सुविधाजनक यातायात र स्वस्थ्य जीवन पर्दछन्।
छ महिनापछि व्यक्तिगत रुपमा मेरो मित्र बनिसकेकी उपप्रधानमन्त्री कोइराला हिमाल नाघेर पश्चिम चीन आइन् र त्यहाँ भएको वास्तविक घटनालाई आफैँले अवलोकन गरिन्। त्यसबेला म चेङ्दु विमानस्थलमा उनलाई स्वागत गर्न गएँ। सिचुवानको हिमाली भेगको दक्षिणी हाइवेमा उच्च गतिमा दौडिरहेको कारमा उनले मसँग इर्ष्यापूर्वक भनिन्, ‘यस्तै बाटो बनाउन नेपालमा पनि चीनमा जस्तै शान्त सामाजिक वातावरण आवश्यक छ। लोकतन्त्र मात्र होइन, शान्ति पनि आवश्यक छ।’
यात्रामा निस्कनुअघि के थाहा भयो भने (कनेक्टिभिटिले गर्दा) चीन र नेपाल एकदमै नजिकिएका छन्। हामीले रेल चढेर ल्हासा छाड्यौँ। चिनियाँ लोकोमोटिभले बनाएको रेलमा पर्याप्त अक्सिजन थियो। ११४ वटा पुल, २९ वटा सुरुङसहितको दुई घण्टाको यात्रा पूरा गरेर हामी सिगात्से आइपुग्यौँ। २०२० सम्म तिब्बतको सिगात्सेबाट रेलमार्ग केरुङ जोडिनेछ। त्यसपछि नेपाल पुग्न मात्र २ घण्टा लाग्नेछ। त्यो रेलमार्गको जम्मा लागत २.२ अर्ब अमेरिकी डलर हुनेछ। औसतमा प्रतिमिटर ५० हजार युआन (करिब सात हजार आठ सय ७० डलर)। कठिन भौगोलिक बनावटले गर्दा धेरै पुल र सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यो संसारको सबैभन्दा महंगो रेलमार्ग हुनेछ। यो योजनाअन्तर्गत बेइजिङबाट सियान, ल्हासा, सिगात्से, केरुङ हुँदै काठमार्डौँ पुग्दा प्राचीन रेशम मार्ग ब्युँतिनेछ। यसले सातौँ शताब्दीको जाओ गाम्बो, वेनचेंग राजकुमारी र नेपाली भृकुटीलाई पुन जोड्नेछ, जसको विवाहका कारण तिब्बतमा व्यापार र बौद्ध धर्म सुरु भएको थियो।
तीस वर्षअघि चीनका राष्ट्रपति ली जियानिनले काठमाडौँमा ‘कमल सूत्र’ को बहुमूल्य संस्कृत पाण्डुलिपि नेपालका राजा वीरेन्द्रलाई उपहार दिएका थिए। जियानिनले त्यसबेला भनेका थिए, ‘यो धर्मग्रन्थ फेला परेपछि मात्र दुई सय प्रति छापिएको छ, जुन यहाँलाई उपहार दिँदैछु। यो सँस्कृतमा लेखिएको छ र चीनमा सँस्कृत पढेका विद्वान कम हुँदैछन्।’
सन् ३९९ मा पूर्वी जिन वंशका जियाङ शाङ्सी छ वर्षको यात्रामा युमन, दनहाङ हुँदै हिन्दकुश पर्वत नाघेर मरुभूमि पुगेका थिए। इतिहासअनुसार सर्वप्रथम नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी फा सियान थिए। ताङ वंशको कालमा भिक्षु सुआनझाङले बौद्ध नामक पुस्तक लेखाए, जुन नेपालसम्बन्धमा नेपालमा लेखिएको पहिलो पुस्तक थियो। पहिलोदेखि दशौँ शताब्दीका बीचमा भारतीय प्राचीन बौद्धमार्गीहरुले ठूलो संख्यामा अर्थशास्त्र, कानुनका पुस्तकहरु लिएर आए। तिनीहरू बौद्धधर्मलाई फैलाउँदै मध्य एशिया, चीनको सिन्ज्याङ, तिब्बत र नेपाल पुगे। यस क्षेत्रका बौद्धमार्गीहरु पढ्नका लागि भारत पनि पुग्थे। सुआनझाङ फर्किंदा हात्ती र घोडामा ५ सय २० ओटा पोका बोकेर फर्किए। चीनको सबैभन्दा पुरानो पवित्र सँस्कृत ग्रन्थ १०८२ मा लेखिएको कमल सूत्र हो।
४१ वर्षअघि अध्यक्ष माओले २८ वर्षीय राजा वीरेन्द्र र सुन्दर रानी ऐश्वर्यलाई भेटे। अध्यक्ष माओले अघिल्लो वर्ष रिचार्ड निक्सनसँग हात मिलाएझैँ वीरेन्द्रसँग धेरैबेरसम्म हात मिलाए र एक घण्टा ४० मिनेट लामो ऐतिहासिक महत्वको कुराकानी गरे। भेटमा माओले छिङ्हाई–तिब्बत रेलमार्ग निर्माणको कुरा अघि सारे– ‘जबसम्म यो रेलमार्ग बन्दैन, तबसम्म मलाई निद्रा लाग्दैन।’ चाउ एन लाईले थपे, ‘यो रेलमार्गको निर्माण ल्हासा हुँदै नेपालको सीमासम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि हो।’
त्यसबेला चीनभरमा तिब्बत मात्रै यस्तो क्षेत्र थियो, जसलाई रेलमार्गले छोएको थिएन। तिब्बतका मानिसको जीवन सुधार्न रेल अत्यावश्यक थियो।
चीनको तेह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा सिगात्सेबाट केरुङ, पुराङ र यादोङसम्म रेलमार्ग खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। छिङ्हाई–तिब्बत रेलमार्गको रसद तथा सेवाकेन्द्र नाक्चु र ल्हासामा खुल्नेवाला थियो। केरुङ पहिलेदेखि नै महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग थियो। १३ सय वर्षअघि भृकुटी र तिब्बतमा बौद्ध धर्मका संस्थापक पद्मसम्भव केरुङ हुँदै तिब्बत गएका थिए, जुन काठमाडौंबाट ९० किलोमिटर मात्र टाढा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा छ। यहाँबाट ८० प्रतिशत नेपाली व्यापारीले व्यापार गरिरहेका छन् र झण्डै ८० हजार पर्यटक ओहोरदोहोर गर्छन्। चीन र भारतबीच यादोङ एउटा मुख्य व्यापार मार्ग हो, जहाँ गान्तोक ट्रेल, सिक्किम हुँदै भुटानसम्मका मानिस संलग्न छन्। रेलमार्ग खुलेपछि हिमालय क्षेत्र दुर्गम प्राकृतिक बाधाको रुपमा रहने छैन। चीन र नेपालमा मानिसहरुको आवतजावत र व्यापार उल्लेखनीय रुपमा बढ्नेछ।
सफा मौसममा हिमाल माथिबाट जहाजमा उड्दै गर्दा सगरमाथा प्रष्टसँग देखिन्छ। चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले १९५७ र १९६० मा गरी दुई पटक नेपाल भ्रमण गरे। उनी जहिले पनि हिमालमाथिबाट उडेर नेपाल जान चाहन्थे। १९७८ मा ७४ वर्षीय देङ सियाओ पिङ पनि नेपाल गए। चेङ्दुबाट उडेको उनको विशेष जहाज हिमालमाथि हुँदै नेपाल ओर्लेको थियो।
सगरमाथाको शिखर वरिपरि बादलका मसिना गुच्छा हेर्दै ५४ वर्षअघि सगरमाथाको स्वामित्वलाई लिएर माओत्से तुङ, चाउ एनलाई र नेपाली नेताहरुले पुर्‍याएको बुद्धिमत्ताबारे म सोच्न थालेँ। चिनियाँ कुटनीतिज्ञहरुले सम्झिएअनुसार, नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले भनेका थिए– ‘सगरमाथा हाम्रो सीमामा खडा छ। यो शिखर संसारभर प्रख्यात छ। यसमा चीनको जति राष्ट्रिय भावना गाँसिएको छ, नेपालको पनि उत्तिकै गाँसिएको छ। यो राष्ट्रिय भावनाको प्रतीक हो। त्यसैले दुई प्रधानमन्त्रीले यसलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
माओत्से तुङले पनि कोइरालालाई भेटे र सगरमाथाको ‘विवाद’ बारे छलफल गरे। माओले भने, ‘सम्पूर्ण शिखर तपाईंकोतिर पर्दा हाम्रो भावनामा चोट पुग्छ र सबै हाम्रोतिर पर्दा तपाईंहरुको भावनामा चोट लाग्छ। त्यसैले यो आधाआधा हुनसक्छ।’ माओले यो हिमालको नाम, पश्चिमा नाम झल्किने ‘एभेरष्ट’ नराख्न पनि सम्झाए। उनले एभरेष्ट वा सगरमाथा नभनी बरु ‘चीन-नेपाल मैत्री शिखर’ नाम राख्न प्रस्ताव गरे।
त्यो साता मैले ‘सिल्क रोड करिडोर र छ एशियाली देशको भाग्य’, तथा ‘तिब्बत रेलमार्ग र चीन तथा दक्षिण एशियाको सम्बन्ध’ बारे लेक्चर दिएँ। त्यसपछि विस्तृत कुराकानी गर्न म तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमा गएँ। मैले उनलाई बेइजिङको रेल सिगात्सेमा आइपुग्नु एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगो भएको बताएँ। चीन–दक्षिण एशियाबीचको दूरी घटाउन तथा नेपालको आर्थिक पुनसंरचना गर्न उर्जा, भौतिक पूर्वाधार र अन्य परियोजनाहरू कति महत्वपूर्ण छन् भनेर मैले उनलाई व्याख्या गरेँ। नेपाल र तिब्बतबीच हस्तकला, कपडा, मूर्ति, गलैँचा, अत्तर, औषधीमूलो, गरगहना र थांकाजस्ता परम्परागत वस्तुको हिमाली व्यापार हुन्थ्यो। तिब्बत रेलमार्ग नेपाल जोडिँदा यसले आर्थिक परिदृश्यलाई पूर्ण रुपमा परिवर्तन गरिदिनेछ। रेलमार्गले चीन र नेपालबीच लगानी तथा आर्थिक एकत्वलाई वृद्धि गर्नेछ। अहिले नेपालमा चीनको लगानी भारतको भन्दा पछाडि छ। तर चाँडै नै चीन भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार बन्ने सम्भावना छ र नेपालमा लगानी गर्ने मामिलामा पनि बेइजिङले दिल्लीलाई उछिन्नेछ। चीनको निरन्तर विकासले एशियाली छिमेकीमा ठूलो अवसर ल्याउनेछ। नेपाल पनि ती देशहरुमध्ये एक हो, जसले ‘चाइना डेभलपमेन्ट एक्सप्रेस’ समात्न सक्छ।
‘यो नेपाल भ्रमणको क्रममा तपाईं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्नुहोस्,’ कोइरालाले ठूलठूला सुन्दर आँखाले मलाई नियाल्दै भने। आधा घण्टासम्म एकोहोरो मेरो कुरा सुनेपछि उनले भने, ‘तपाईंको कुरा पत्यारलाग्दो छ। मलाई आशा छ, माओवादी नेतालाई सहकार्यका लागि मनाउन तपाईं सक्नुहुनेछ। तनावपूर्ण संघर्षका कारण सरकार निकै कमजोर छ। सबै मुख्य पार्टीहरू सहमत भएनन् भने सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन।’
दिउँसो मैले प्रचण्डसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सकिनँ। तर त्यही साँझ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मलाई भेट्न चाहेको खबर पाएँ।
‘नेपालमा पूर्वराजाको भूमिका महत्वपूर्ण छ’, स्यायो झुले टेलिफोनमा भने। मैले उनलाई आफू बसिरहेको याक एण्ड यति होटलमा पूर्वराजासँगको भेटबारे छलफल गर्न बोलाएँ।
म याक एण्ड यति होटलमा बसिरहेको थिएँ, जुन नारायणहिटी राजदरबार नजिकै थियो। त्यो सबैभन्दा पुरानो होटल नेपालका ‘सैनिक शासक’ राणा परिवारको हवेली थियो। त्यसको नजिकै राणा परिवारकै ‘ड्रिम गार्डेन’ थियो। सन् १८४६ मा बेलायतसमर्थक जंगबहादुर राणाले सैनिक कू गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको वंशीय शासन स्थापित भयो र राजाको अधिकार कटौती भयो, जसले गर्दा राजाहरू राणा परिवारका कठपुतली बने।
सन् २००१ मा गर्मीको एक साँझ नारायणहिटी राजदरबारमा भएको हत्याकण्डले संसारलाई चकित बनायो। युवराज दीपेन्द्रले पारिवारिक भोजका क्रममा राजपरिवारका १२ सदस्यहरुको हत्या गरे र अन्तमा आत्महत्या गरे। उनले आफ्नी प्रेमिका देवयानी राणाको कारण सो हत्याकाण्ड मच्चाएका थिए। हत्याकाण्डअघि एक भविष्यवक्ताले राजा वीरेन्द्रको जीवनको भविष्यवाणी गरेका थिए। जसमा उनलाई तीन खतरा थियो— राणाहरुसँगको शत्रुता, माओवादी गुरिल्ला र एक व्यक्तिगत रहस्यमयी शक्ति। अन्ततः वीरेन्द्रको अन्त्य तिनैमध्ये एक शक्तिको हातबाट भयो।
वीरेन्द्रको वंश नाशपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए। उनी १९५० मा ३ वर्षको छँदा नै ११ महिनाका लागि राजा बनेका थिए। त्यो समय नेपालको सम्पूर्ण सैनिक र राजनीतिक शक्ति राणाहरुको हातमा थियो। ज्ञानेन्द्रका हजुरबुबा राजा त्रिभुवन आन्दोलनअघि नेपाल छोडेर भारत गएका थिए। दुई महिनापछि राणा शासनको समाप्तिसँगै त्रिभुवन फेरि नेपाल फर्किए र राजगद्दीमा बसे।
२००१ मे ६, झरी परिरहेको दिन। सुनको श्रीपेच लगाएर शेषनागको रुप भएको राजगद्दीमा बस्दा ज्ञानेन्द्र नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रको १२ पुस्ताका राजा बने। गद्दी आरोहणको क्रममा बौद्ध भिक्षुले शुद्ध पानी राजाको गोडामा छर्किने चलन थियो। सो अवसरमा एक जना सैनिक जवानले राजाको जुत्ता लगाइदिँदै गरेको तस्बिर मिडियामा आयो। एक पटक एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उनले पत्रकारहरुलाई ८ घण्टासम्म पर्खिन लगाए। त्यसपछि उनी आए, मुसुक्क हाँसे र एक शब्द नबोली फर्केर गए।
राजा बनेपछि ज्ञानेन्द्रले आफू नेपाली राजनीतिक दलहरुको शक्तिसंघर्ष र माओवादीको युद्धबाट असन्तुष्ट रहेको अभिव्यक्ति दिए। अलिपछि उनले १९९० मा उनका दाजु राजा वीरेन्द्रले कायम गरेको संवैधानिक राजतन्त्रलाई फालेर आफ्नो प्रत्यक्ष सैनिक शासन चलाउन सुरु गरे। तर उनको क्रिया उनी आफैँतिर फर्कियो। उनले देशव्यापी आन्दोलनको सामना गर्नुपर्‍यो। उनले सैनिक शासन घोषणा गरेर फोन, प्रेस बन्द गराए। बाहिर निस्किनेलाई गोली हान्ने आदेश दिए।
स्यायोले मलाई कारमा राखेर समर प्यालेसतर्फ लगे। आधाबाटोमा कार रोकेर हाम्रा गाइड प्रेमलाई चढाए। अधवैँशे प्रेमले राजपरिवारकै एक छोरी बिहे गरेका थिए।
कार सहरको धुलो उडिरहेको बाटोको बीचबाट भीडलाई छल्दै अघि बढ्यो। ७० को दशकको अन्तिमतिर चीनको सहयोगमा निर्मित त्यो बाटोमा भीडभाड र जाम हुनु सामान्य कुरो थियो।
‘बाटो खाली भयो, कुदाउनुस्!’
‘त्यो गाडी पछिपछि जानुस्!’
प्रेम स्यायोलाई कार चाँडो चलाउन भनिरहेका थिए। एकपछि अर्को कार, मोटरसाइकल र हर्नको चर्का आवाजले हामी घेरिएका थियौँ। स्टेयरिङ समातेका स्यायो आफैँसँग भनिरहेका थिए, ‘राजा, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जेजे भए पनि उनीहरु आफ्नै भाग्य भेट्न सक्दैनन्। एक छिन भेट्न पनि यति टाढा आउनुपर्ने गरी उनलाई कति पर राखिएको छ त!’
सडक खाल्डाखुल्डीले भरिएका थिए। सडकको बीचमा गाई र कुुकुर मात्र बरालिएका थिएनन्, कहीँकहीँ स्थानीयबासी बाटो रोकेर उभिएका थिए। आधाघण्टा गाडीमा धक्का खाएपछि हामी नागार्जुन दरबारको नजिक पुग्यौँ। पूर्व शाही परिवारको गर्मी यामका लागि बस्ने स्थान थियो नागार्जुन दरबार, जुन सहरबाट करिब ७ किलोमिटर उत्तरपश्चिममा अवस्थित थियो। १५ सय मिटरको उचाइमा रहेको सो स्थानबाट पूरा काठमाडौँ देखिन्थ्यो।
नजिकैको डाँडाबाट अस्ताउँदै गरेको सूर्यको प्रकाशमा उपत्यकाको भीडभाडयुक्त घरहरु हेर्दा हलुका नसाजस्तो लाग्थ्यो। टाढाका घुमाउदार डाँडाकाँडाको बीचमा धुवाँ, बादलको साथमा उपत्यका रंगीन वस्त्र लगाएझैँ देखिन्थ्यो।
६ वर्षअघि नेपालको संविधानसभाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी राजदरबारबाट निस्किन १५ दिनको समय दिएको थियो। राजा र राजपरिवारलाई सम्पूर्ण विशेषाधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो। उनको भत्ता बन्द गरिएको थियो। २४० वर्षदेखि शासन गरिरहेको शाहवंश इतिहास बनेको थियो। ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी मात्र गुमाएका थिएनन्, उनले कर र बिजुलीको बिल समेत तिर्नुपरेको थियो। नारायणहिटी राजदरबार संग्राहलयमा फेरिएको थियो। रानीको ब्युटिसियनको टोली समेत पदमुक्त भएको थियो।
हाम्रो कार शान्त पहाड उक्लिरहेको थियो। डाँडालाई ढाकेका सल्लाका रुख स्थिर खडा थिए। जतिमाथि गयो, उति शान्त र स्वच्छताको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो। एउटा पुरानो फलामे ढोकामा पुग्नुअघि हामी एक दर्जन सैनिकहरुका अगाडि रोकियौँ।
हामी भित्र पस्यौँ। दुई सैनिकले ढोका खोलिदिए। एउटा अल्टो कारले हामीलाई बाटो देखायो र हामी जंगलको बीचतिर लाग्यौँ।
जंगलको बीचमा ताजा हावामा स्यायोले आफूलाई रोक्न सकेनन् र कार तीव्र गतिमा चलाए।
पछाडिको सिटमा बसेका प्रेमले सम्झाए, ‘बिस्तारै, अगाडि सडकमा लेउ लागेको छ।’
राजालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले कारभित्रै छलफल गर्‍यौँ।
‘हिज म्याजेस्टी भन्नुपर्छ!’ प्रेमले सम्झाए।
‘त्यसो हो र? योर म्याजेस्टी भन्ने होइन र?’
प्रत्यक्ष भेट्दा योर म्याजेस्टी र अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्दा हिज म्याजेस्टी भन्नुपर्ने नियम थियो तर म निश्चित थिइनँ। जे भए पनि दैनिक जीवनमा म्याजेस्टी प्रयोग गर्ने मान्छे यो संसारमा कम मात्र छन्।
दश मिनेट लेउ लागेको ग्राबेल बाटोमा हुइँकिसकेपछि पहाडको टुप्पोमा एउटा सफा र चिटिक्क परेको फलामे गेटअघि कार रोकियो। दुई हतियारधारी सैनिकले हाम्रालागि गेट खोलिदिए। बंगला नजिकै थियो। कार त्यहीँ रोकियो, जहाँ अरु गाडी थिएनन्। आकाश पहिले नै अन्धकार भइसकेको थियो र कारभन्दा बाहिर उज्यालोले भरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको मनोरम दृश्य थियो।
एक अग्लो र बुढो मानिस हाम्रो अगाडि उभिन आइपुगे। ढाकाटोपी र नेपालको परम्परागत पहिरन दौरासुरुवाल लगाएका ती मानिसले मुस्कुराउँदै हामीलाई स्वागत गरे।
‘उहाँ नै राजा हो?’ मैले नेपाली साथीलाई सोधेँ।
‘होइन, उहाँ राजाको निजी सचिव हो। उहाँले तपाईंलाई राजसमक्ष पुर्‍याउनुहुनेछ,’ प्रेमले भने।
निजी सचिवले हामीलाई शाही रिसेप्सनमा पुर्‍याए। सानो, साधारण कोठामा एउटा ठूलो र दुई साना सोफा थिए। सुन्तला रङको पर्दा झुण्डिएका दुई ओटा झ्याल थिए। सिलिङमा पंखा झुण्डिएको थियो। चारैतिर सेता पर्खाल थिए, एकापट्टि राजारानीको बेग्लाबेग्लै चित्र झुण्डिएको थियो। ढोकाको सीधा अगाडिको पर्खालमा गोलो भित्तेघडी थियो। अर्कोपट्टिको भित्तामा चारओटा फ्रेम राखिएका थिए, जहाँ राजाले लेखेका कविता टाँसिएको थियो।
बिजनेस कार्ड साटेपछि मलाई थाहा भयो, राजाका सचिव ... शाक्य रहेछन्। ठूलो स्वर भएका शाक्यले राजाले प्रोफेसर लीसँग मात्रै भेट्ने हुँदा स्यायो र प्रेमलाई आधा घण्टा त्यहीँ पर्खिन भने।
त्यसपछि चिया ल्याइयो। चिया ल्याउने मान्छेले सेतो कमिज र छातीनेर नेपालको झण्डा टाँसिएको हेर्दा सफा देखिने रातो ज्याकेट लगाएका थिए।
सचिव शाक्यले फोन उठाए। कुराकानी सकेपछि फोन राखे र मलाई अर्को सानो कटेजको माथिल्लो तलामा लगे। त्यो राजाको अध्ययन कक्षका साथै बैठक कक्ष पनि थियो। शाक्यले ढोका ठेले।
६७ वर्षीय राजा ज्ञानेन्द्र हात जोडेर उभिएका थिए। खैरो रङको राष्ट्रिय पोशाकको साथमा नीलो भेष्ट र कालो जुत्ता लगाएका थिए उनले।
‘धन्यवाद हिज म्याजेस्टी,’ मैले हात जोडेर भनेँ। मैले बेइजिङबाटै राजाका लागि पठाइएको नीलो रङको चिनियाँ माटोको उत्कृष्ट भाँडो उपहार ल्याएको थिएँ। मैले उनलाई सो उपहार दिएपछि उनले नजिकैको स्टुलमा त्यसलाई बिस्तारै राखे। दराजमा पुस्तकहरु हार मिलाएर राखिएको थियो। टेबलमा राखिएका दुई किताबको बीचमा मयुरको प्वाँख चेपिएको थियो।
‘फेरि एक चिनियाँ मित्र भेट्न पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ,’ ज्ञानेन्द्रले भने, ‘तपाईं आठ वर्षपछि मैले देखेको पहिलो चिनियाँ व्यक्ति हो।’
अध्ययन कक्षको भुइँमा प्लेड गलैँचा ओच्छ्याइएको थियो। त्यसभन्दा माथि अण्डाकार हरियो रङको रेशमी गलैँचा थियो। ठूलो बाघको प्रतिरुपमुनि हामी सोफामा बस्यौँ। ‘यो हाम्री साम्राज्ञी माताले शिकार गर्नुभएको हो’, उनले भने, ‘म वातावरणवादी हुँ।’
एउटा पुरानो डेस्कटप कम्प्युटर र ग्लोब एउटा सानो टेबलमा राखिएको थिए।
ज्ञानेन्द्र घोडचढी र प्रकृतिका शौखिन हुनुका साथै वन्यजन्तुप्रति जिज्ञासु रहेछन्। आफ्नो बालापन उनले भारतको सेन्ट जोसेफ स्कुलमा अध्ययन गरेर बिताए। ज्ञानेन्द्रले आफ्नो स्कुलका साथीहरु र कडा शिक्षकलाई सम्झिए। उनले अरु विद्यार्थीसँगै खाने, उस्तै कपडा लगाउने, ठूलो खर्च गर्न नपाउने अवस्था थियो। उनले आफू शाहजादा भएको कुरा समेत स्कुलमा खोल्न पाएका थिएनन्। वयष्क भएपछि पनि ज्ञानेन्द्रले निम्नस्तरको जीवन बिताउने तरिकालाई कायम राखेका थिए। उनी एकान्तप्रेमी थिए र वातावरणीय क्रियाकलपप्रति मात्रै जिज्ञासु थिए। शाही परिवारका अन्य सदस्यले झैँ उनले पनि गीत र कविता लेखे। रानी कोमलको पनि त्यस्तै शौख थियो । उनको त झन गीत रेकर्ड नै भएको थियो।
‘यो घर निकै सानो छ, म र मेरी पत्नी मात्रै यहाँ बस्छौँ। मेरा छोरीज्वाइँहरु डाँडाको तल सहरमा बस्छन्,’ उनले भने।
यसैबीच एक व्यक्तिले दुई कप कफी ल्याएर राजा र मेरोबीचको टेबलमा राखिदिए। राजाका सचिव र कफी ल्याउने दुवै जना बाहिर निस्किए। राजा र म एक्लै कोठामा कुराकानी गर्न थाल्यौँ।
‘मलाई आशा छ तपाईंले मेरो व्यक्तिगत शुभेच्छा राष्ट्रपति सी चिनफिङसमक्ष पुर्‍याउनु हुनेछ’, उनले भने, ‘मलाई आशा छ, चीनले निरन्तर राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गरिरहने छ।’
‘मेरो परिवारमा मेरो बुबा र दाजु दुवैजना अनि मैले पनि नेपाल–चीनबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई दृढ रुपमा अघि बढाउँदै आएका छौँ। मेरो बुबा राजा हुँदा उहाँले अध्यक्ष माओलाई भेट्नुभयो। त्यसबेला म पहिलो पटक चीन गएको थिएँ। माओको निधन भएको ७ वर्षपछि देङ स्यायो पिङले मलाई चीनमा निम्त्याए र त्यसपछि म एक दर्जन पटक चीन गइसकेको छु। मैले राष्ट्रपति जियाङ जमिन र हु जीन ताओलाई पनि भेटेको छु। म चीनको प्रगतिको विभिन्न आयामहरुप्रति सचेत छु। चीनको प्रगतिले छिमेकी देशहरुमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। चीन तिब्बतप्रति संवेदनशील रहेको कुरा पनि मलाई थाहा छ। मैले राष्ट्रपति जियाङ जमिन र हु जीन ताओलाई पनि नेपालको भूभागमा चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि हुनेछैन र त्यहाँको साँस्कृतिक सुरक्षामा कुनै प्रतिकूलता आउन दिनेछैन भनेर वचन दिएको थिएँ,’ राजाले भने।
उनले थपे, ‘यतिबेला नेपाल निकै अस्थिर बनेको छ, नेपालको संविधान अझै बनेको छैन र अझै देश संक्रमणकालमा छ। नेपालको शाही परिवार मूलधारको राजनीतिमा नभए पनि भविष्यमा शक्तिमा जोसुकै हुँदा द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई नेपालले सधैँ अगाडि बढाउनुपर्छ। नेपालको शासन परिवर्तन हुनसक्छ तर दुई देशबीचका सम्बन्धहरु परिवर्तन हुनु हुँदैन। आपसी सम्बन्ध विश्वसनीय, स्वस्थ, लचिलो र बुद्धिमत्तापूर्ण हुनुपर्छ।’
‘चीन र भारत नेपाल हुँदै एउटा व्यापार करिडोर बनाउने सहमतिमा पुग्न सक्छन्। नेपालको विकास र प्रगतिबाट चीन र भारतलाई पनि फाइदा पुग्छ। यी दुई देशसँग नेपालको सम्बन्ध हिजोबाट सुरु भएको होइन। हजारौँ वर्षको इतिहास छ। चीन तिब्बतको सुरक्षाप्रति गम्भीर छ। त्यसैले उसले नेपालको सरकारलाई स्पष्ट रुपमा एक, दुई, तीन ... तोकेर यो यो गर भन्नुपर्छ। चीन किन तिब्बतप्रति चासो राख्छ भन्ने कुरा नेपाललाई थाहा दिनुपर्छ। चिङहाई–तिब्बत रेलमार्ग नेपालसम्म ल्याउँदा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न सक्छ। चीन र नेपालबीच संयुक्त एयरलाइन्स चलाउँदा के फाइदा हुन्छ? यसबाट भारतलाई के फाइदा हुन्छ? हामीले भारतीय नेताहरुलाई पनि यस्ता आयोजनाहरुले कसरी फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा बताएर उनीहरुलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ,’ पूर्वराजाले भने।
‘नेपालले चीनको कुभलो कहिल्यै चाहेन तर अरु केही शक्ति नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न चाहन्छन्। त्यसैले नेपाल यस मामिलामा दूरदर्शी हुन जरुरी छ। दुर्भाग्यवश नेपालका अहिलेका राजनीतिक नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थ र भागबण्डामा मात्र चासो दिन्छन्। उनीहरुलाई देशको र जनताको हितको वास्ता छैन। यी नेताहरुले जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। उनीहरुलाई देशको विकास र भविष्यको कुनै चिन्ता छैन। पहिलो कुरा त नेपाललाई एकताबद्ध गरेर अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहै छैन। पहिले नेपालको राष्ट्रिय एकता सुदृढ थियो। अहिले त्यो एकता भाँडिएको छ, विखण्डन छाएको छ। नेपालको राजतन्त्र नै सुदृढ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो। त्यसैले राजा आवश्यक छ। नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्र आवश्यक छ, किनभने नेपाली जनतालाई अभिभावक चाहिएको छ’ राजा ज्ञानेन्द्रले भने।
उनका आँखा टाढा कतै हेरिरहेका थिए। उनी एक मिनेटका लागि रोकिए।
उनले फेरि भन्न सुरु गरे, ‘नेपालका सबै बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेता र सामान्य जनताले पनि सामाजिक एकता र राजनीतिक सम्झौताका बारेमा सोच्नुपर्छ। मैले नेपाली समाज र देशको विभाजनप्रति चिन्तित हुनैपर्छ। एक बलियो र समृद्ध नेपालले चीनका लागि पनि सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ। दुर्भाग्यवश प्याण्डोराको बाकस खुलिसकेको छ। त्यसलाई तुरुन्तै बन्द गर्न सम्भव छैन। तर नेपाली जनताले आफ्नो अभिभावक, राष्ट्रिय शक्ति र एकताको प्रतीक कति आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझेका छन्। विभिन्न समुदायका जनता मकहाँ आउँछन् र हामी हाम्रो देशमा एकता कायम भएको हेर्न चाहन्छौँ भन्छन्। कसैलाई पनि जातीय र भाषिक आधारमा क्षेत्रहरु विभाजन गर्ने कुरा मन परेको छैन।’
नेपालको संविधानसभाले सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित पहिलो बैठकबाटै नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ घोषणा गरिसकेको थियो। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र आम नागरिक बनेका थिए। दरबारबाट बाहिरिँदै गर्दा ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए, ‘आजको मितिमा मैले लगाउँदै आएको र हाम्रो परिवारको विरासतको रुपमा रहँदै आएको वंशीय श्रीपेच र राजदण्ड नेपाल सरकारको सुरक्षा र जिम्मामा छोड्दैछु।’
उनले सम्पूर्ण विदेशी सरकार र देशहरुलाई धन्यवाद दिए र भविष्यका सरकारसँग पनि उस्तै सम्बन्ध रहने अपेक्षा व्यक्त गरे। नेपालका तीन मुख्य राजनीतिक दलहरुले राजाको सट्टामा राष्ट्रपतिको कार्यालय स्थापना गर्ने सहमति गरेका थिए। धेरैजसो शक्ति प्रधानमन्त्रीको हातमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो। नेकपा (माओवादी) ले राजालाई (तत्कालै) दरबार छोड्न सूचना दियो। उनको ठूलो सुरक्षा जत्था, कारहरु र घोडाहरु खोसियो। नेपाली रुपैयाँमा भएको राजाको टाउकोलाई सगरमाथाले विस्थापित गर्‍यो।
ज्ञानेन्द्रले भने, ‘यो दलगत संघर्षबाट मैले छुटकारा दिलाउनै पर्छ। म कुनै पार्टीमा छैन। म यो देशको हुँ। राजा कुनै राजनीतक मान्छे होइन, देशको अभिभावक हो। राजाले राजनीतिक टिप्पणी गर्दैनन्, राजनीतिक मत व्यक्त गर्दैनन्। राजाले व्यापक परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ। राजाले विषयगत बन्नुहुँदैन। हामीले हरेक मुद्धामा वस्तुगत स्थिति कायम राख्नुपर्छ।’
उनले धातुको कफी टेबलबाट चुरोटको बट्टा उठाए र मलाई लिन अनुरोध गरे। मैले मुस्कुराएर टाउको हल्लाएँ, ‘म चुरोट पिउँदिन, तपाईं लिनुस्।’
उनले एउटा चुरोट सल्काए, गहिरो कस लिए अनि उँभो फर्केर धुवाँ छोडे। त्यसपछि मतिर फर्केर भने, ‘मेरा हजुरबुबा र बुबाले पनि यहीँ चिनियाँ राजदूतलाई भेट्नुभएको थियो। जे होस्, पछिल्लो ८ वर्षमा म चीन गएको छैन। नेपालमा तीन जना चीनका राजदूतहरु फेरिइसके, मैले कसैको मुख देखेको छैन।’
‘प्रत्येक दिन संसारमा सुसुप्त रुपमा भइरहेको परिवर्तनलाई म निगरानी गरिरहेको हुन्छु। म फेसबुक, ट्वीटर चलाउँछु र टिभी हेर्छु। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रत्येक दिन मानिसहरु मेरो घरमा व्यक्तिगत रुपमा संसारभरका बारेमा मसँग कुरा गर्न आउँछन्, उदाहरणका लागि चीन र जापानबीचको समुद्री विवाद, चीन–भारत सम्बन्ध इत्यादि’, ज्ञानेन्द्रले भने।
‘म आज तपाईंसँग नेपाली जनतालाई नसुनाएको कुरा भन्छु। मन भरिइसकेको कारण यी महत्वपूर्ण कुरा म आज सुनाउँछु। केही कुराहरु यस्ता छन्ः १) जापानप्रति भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियालाई चीनले उच्च सतर्कता दिनुपर्छ किनभने भारतले सुरक्षा मामिलामा जापानसँग मिलेर चीनलाई संकटमा पार्न सक्छ, २) राष्ट्रपति सी चिनफिङको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री मोदीले उनलाई कसरी स्वागत गर्छन्, त्यो हेर्न हामी आतुर छौँ, ३) प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, सहभागिमूलक जस्ता पश्चिमा अवधारणाहरुसँग चीन अत्यन्तै सतर्क रहनुपर्छ। उनीहरु यस्ता अवधारणामार्फत चीनलाई अघि बढ्न नदिनेगरी घेर्न खोजिरहेका छन्। पश्चिमाहरुले नेपाली समाजमा घुसेर यसको स्थायित्वलाई तहसनहस बनाइरहेको म देखिरहेको छु, ४) अमेरिकी सरकारले मध्यपूर्व र सिरियामा अर्को ‘फ्र्यांकेनिस्टाइन’ खडा गरेका छन्। अमेरिका जहिले पनि यस्ता शक्तिहीन फ्र्यांकेनिस्टाइनसँग आमनेसामने हुन चाहन्छ। नतिजा सिरिया, इराक, इजरायल र युक्रेनजस्ता देशमा प्रोक्सी वार जन्मियो र त्यो सबै सिआइएले जन्माएको हो। तर अब छिट्टै मानिसले यो कुरा बुझ्नेछन्।
ठीक त्यही बेला बिजुली गयो र कोठा अन्धकार भयो। अध्याँरोले राजा ज्ञानेन्द्रलाई खल्बल्याएन। उही गतिमा उनले चुरोट तानिरहे र उत्तिकै जोशमा बोल्दै गए, ‘चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धमा चीनले धैर्यवान् हुनैपर्छ र यथार्थलाई बिर्सिनु हुँदैन। तपाईं आफ्नो साथी रोज्न सक्नुहुन्छ तर छिमेकी रोज्न सक्नुहुन्न। मेरो कुरा सुन्ने धैर्य देखाउनु भएकोमा म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु। यी कुराहरु मेरो दिमागमा सघन भएर बसेका थिए। मैले आज चिनियाँ साथीसँग हृदय खोलेर कुरा गरेँ।’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अन्ततः आफ्नो जीवनदर्शनबारे कुरा गरे, ‘मानवता पूर्ण रुपमा सन्तुलित हुनुपर्छ। पैसा, रक्सी, नारी र राजनीतिको खोजी मात्रैलाई जीवनका उच्च गुण भनेर नामाकरण गरिनु हुँदैन। यी सबै कुराहरु सांसारिक सम्पत्ति हुन्, यी क्षणभंगुर हुन्छन्। तर मेरालागि राष्ट्र नै पहिलो स्वार्थ हो। बहुसंख्यक जनताको सेवा नै सबैभन्दा महत्पूर्ण हो।’
‘त्यसोभए तपाईंको विचारमा राष्ट्रिय नेताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण गुण के हो त?’ मैले सोधेँ।
‘मानवता र नम्रता राष्ट्रिय नेतामा हुनैपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण गुण हो’, उनले भने।
त्यति भनेर ज्ञानेन्द्र उठे र फोनमा आफ्नो सचिवलाई मेरो साथी स्यायो र प्रेमलाई बोलाउन भने।
(प्रोफेसर ली सिग्वाङ बेइजिङस्थित छिङह्वा विश्वविद्यालयमा सञ्चार अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका निर्देशक हुन्। ५ डिसेम्बर २०१४ मा प्रकाशित लीको यो आलेख गणतन्त्र दिवसको सन्र्दभा चिनियाँ भाषाबाट भावानुवाद गरिएको हो)
प्रकाशित १४ जेठ २०७५, सोमबार | 2018-05-28 15:40:36
ली सिग्वाङबाट थप
यसरी सम्झिए प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो चीन भ्रमण